मैले खोजेको त्यही हुकुमीतन्त्र होइन महाराज ! « Postpati – News For All
मैले खोजेको त्यही हुकुमीतन्त्र होइन महाराज !
टिकाराम वली । रगत, पसिना र श्रम चुसेर बसेका बोसोका पारखीहरुलाई रेयल कथा सुनाउन पाएको छैन ।
सत्तामा पुगेका बर्गीय साथीहरूको पनि साथ पाएको भए, कमरेडले सुनाएको संगिन कथा दुष्टहरुलाई देखाउने बेला आएको छ । मैले खोजेको फेरि त्यही हुकुमी तन्त्र होइन महाराज ! त्यही हुकुमी तन्त्रले दिएको कठिन शासन विरुद्ध मैले लोकतन्त्र रोजेको हुँ ।
महाराजलाई नागार्जुनको महल कमि भएको होला । तर त्यो महलमा पनि हाम्रो रगत र पसिना बगेको छ । महाराजले बुझेको भए नागार्जुनको महल भन्दा गरिबको झुपडी रोज्नु हुन्थ्यो होला । अन्याय विरुद्ध न्यायको आवज कहिले बोलिदिने आँट भएन महाराजलाई ।
त्यसैले हामीले कमरेडको समाजवाद रोजेका छौ । कमरेडको कृषिक्रान्ति खोजेका छौ । हरियो पासपोर्टको बदला किम जोग जस्तै साहसी नेता रोजेका छौ ।
नागार्जुनको सुबिधा पनि कमि भएको भए, हाम्रो निरहताको फाइदा उठाउने महाराज विरुद्ध हाम्रो हड्डी एटम्बम र मिसाइल भएर बिस्पोट हुनेछ । मानव बिनाको हुकुमी अड्डा हामीले खोजेको होइन महाराज ।
हामीले खोजेको त महासागर जस्तै सबै मिलेर बग्ने । हिमाल झैँ अडिग, बुद्ध जस्तै ज्ञानी । माक्र्स जस्तै बैज्ञानिक । चे-भारा जस्तै साहसी । किम जोग जस्तै योजनाकार । बिपि, पुस्पलाल र मदन भन्डारी जस्तै इमानदार । पृथ्वी नारायण जस्तै रास्ट्र निर्माता । मोहन बैध्य जस्तै असल, विप्लव जस्तै युवा रोजेका छौ महाराज ।
तानाशाही महाराजको गद्दी नागार्जुन गए संगै हामीले अन्धभक्त लोकतन्त्र पाएका छौ । बहुदलीय जनवाद र २१अाैं शताब्दीको जनवादको समायोजन गरेर सत्तावाद, भत्तावाद र भ्रष्टाचारवाद त महराहरुले नै सुरुवात गर्नु भएको सुभ कार्य हो ।
महाराज हामीले सबै धर्म, आस्था, संस्कार, पहिचान र अस्तित्वको संमान हक खोजेका छौ । हामी महाराजको एकल पहिचान कदापि रोज्न सक्दैनौं ।
हामीले महाराजको बिभेदको असहिष्णुताको पराकाष्ठा पनि भोगेका छौ । सबै अधिकारको ग्यारेन्टी दिने बैज्ञानिक समाजवाद रोजेका छौ महाराज । हिमाल पहाड र तराई मिलेर बस्ने राष्ट्रको स्वाभिमान खोजेका छौ । महाराजले दिएको त्यही अभाव र अनिकाल, अनि त्यही पिडा र अपमान अझै ताजै छ ।
महाराज साच्चै भन्ने हो भने त्यतिबेलाको दुख अझै कायम छ । पसिना बग्नेको त कुनै ठेगान छैन, आसुँ बग्ने कहानी अझै जारी छन । बम र बारुद महाराजले बाँडेको अझै कानमा आवाज आउछ । महाराजले मन्दिरमा गएर शान्ति रोज्ने, आफ्नो जत्थालाई गाउँ-गाउँमा हत्या हिंसा गर्न मिसाइल छोड्न आदेश जारी गर्ने महाराज ।
त्यसैले त्यो महाराज आउने कुरा नागार्जुनको सुबिधा पनि जनताको हातमा आउने सुभ संकेत हो ।